R/W Cabdi Weli oo ka hadlay wixii ka dhacay xarunta BF, weerar ba’anna ku qaaday Xasan Sheekh – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
R/W Cabdi Weli oo ka hadlay wixii ka dhacay xarunta BF, weerar ba’anna ku qaaday Xasan Sheekh
24th November 2014 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed oo caawa war- murtiyeedeed uu ka soo saaray xaaladda dalka uga waramay marxalada siyaasasadeed ee hadda taagan, caqabadaha uu mooshinku ku keenay hiigsiga 2016, iyo kala qaybsanaanta uu ka dhex abuuray golaha shacabka.
5. Labo jeeroo hore ayaa mooshinlka, si aan waafaqsanayn habraaca baarlamaanka, loogu bandhigay Baarlamaank. Balse, waxaa xildhibaanadu si cad u diideen in mooshinkaas sharci darda ah ee halista gelinaya midnamdeena iyo jiritaanka hayadaheena la horkeeno golaha. Xildhibaanadu waxay si aan kala go’lahayn ugu soo jeedinayeen madaxweynaha iyo shakhsiyaadka kale ee ka shaqaynaya mooshinka in danta dadka ay eegaan kana joogsadaan hawlaha socda ee dalkeena u horseedi kara dib u dhac iyo bur bur. Waxbase lagama maqlin xildhibaandaas. Baaqyo la mid ah kuwaas oo ka soo baxayey dadweynaha iyo umadaha daneeya Soomaaliya ayaa iyagana dhegaha lagu furaystay.
Akhri: Mooshinka ka dhanka ah RW Cabdilweli oo si xeeladeysan loo qeybiyey